आत्मबल बढाउँदा कम हुन्छ तनाव र मानसिक रोगको जोखिम « Naya Page
आत्मबल बढाउँदा कम हुन्छ तनाव र मानसिक रोगको जोखिम
काठमाडौं, १२ चैत । तपाईंलाई विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले कतिको त्रसित बनाएको छ ? हामीमध्ये जोकसैलाई पनि आफू, आफ्नो परिवार वा आफन्तलाई रोग लागिहाल्ने हो कि भन्ने चिन्ता हुनु स्वभाविक हो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सूचना र आधिकारिक समाचार माध्यमका समाचार सामग्री मात्रै पढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेसँगै घरभित्रै बसिरहँदा धेरैले दिनभर धेरै समय यही विषयका बारेमा जानकारी लिने गरेका छन् । उनले भने, ‘दिनभर यही विषय मात्रै हेर्दा र सुन्दा त्यसको प्रभावका रुपमा मानसिक रोग लाग्नसक्ने जोखिम हुन्छ ।’
काठमाडौँमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण एक जना युवतीमा देखिएपछि धेरै जना त्रसित भएको डा. अधिकारीले बताए । छिमेकी मुलुकलगायत विश्वका अधिकांश देशमा यो सङ्क्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि देखिनसक्ने भन्दै डराउन थालेकाहरुमा ती युवतीलाई सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएसँगै भय बढेको छ । विश्वका विकसित देशहरुमा त रोग नियन्त्रण नभएकाले यहाँ फैलन सक्ने भन्दै धेरै डराएको पाइएको उनले बताए । उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा यस्तै पढेपछि त्रास अझ बढेको छ ।’
अहिले कतिपय व्यक्ति रोगप्रति जति सजग हुनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी भएको पाइएको छ । अस्पतालमा उनले भेटेका एक जना महिलाले सन्तानलाई सुरक्षाका लागि भन्दै चार वटासम्म मास्क लगाएको पाइएको उनले बताए ।
रोग विश्वव्यापी बन्दै जाँदा सामान्यभन्दा बढी चिन्ता गर्ने समस्या हुनसक्ने देखिएको प्रमुख कन्सल्टेन्ट साइक्याटिक्स डा अधिकारीले बताए । व्यक्तिमा रोग लाग्ने चिन्ता, रोग लागेपछि पनि उपचार नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता र कतिपयलाई आफ्नो रोजगारी गुम्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता समेत भएको पाइन्छ ।
यसले निराशा, उदासीपनलगायतका समस्या देखिन थालेको उनले बताए । त्यस्तै रोगबारे बढी चिन्ता गर्दा निद्रा कम लाग्ने र थकाइको महसुस पनि हुनसक्ने देखिएको छ । उनले भने, ‘खाली समय पर्याप्त हुँदा पनि लागुऔषधको प्रयोग बढ्न सक्ने देखिएको छ ।’
मानसिक रोगको असर सबै उमेर, वर्ग र पेशामा देखिएको भए पनि यस्ता विपद्का समयमा विगतमा औषधि उपचार गरेर निको भएका वा हाल उपचार गराइरहेका व्यक्ति बढी जोखिममा रहेका छन् । ती व्यक्तिमा कुनै पनि कुरा सहन नसक्ने समस्या देखिन सक्नेछ । बालबालिका पनि रोगको जोखिम बढी रहेको छ ।
उनीहरुमा रोग लागेपछि निको नै हुँदैन भन्ने चिन्ता हुनसक्छ । बालबालिकालाई रोगका बारे सजग गरे पनि अभिभावकले सही सूचना दिएर अनावश्यक चिन्तामा जान दिन नहुने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘जुनसुकै कुरालाई झिँझो मान्ने, निद्रा नलाग्नेलगायत यो रोगका लक्षण हुन् ।’
कोभिड–१९ का बारेमा आधिकारिक निकायका सूचना मात्रै पढ्न र सुन्न उनले सुझाव दिए । रोगका लक्षण देखिएपछि वा सङ्क्रमणको सम्भावना हुँदा ‘आइसोलेशन’ मा गए पनि सामान्य अवस्थामा यो समय परिवारसँग बिताउन सकिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोग गर्नुभन्दा पारिवारका सबै सदस्य एक ठाउँमा बसेर कुराकानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । घरमा बस्दा हुने खाली समय सिनेमा हेर्ने वा सङ्गीत सुनेर बिताउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘परिवार एकै ठाउँमा बस्दा एकले अर्काको कुरा सुन्ने हुँदा डिप्रेसनको जोखिम कम हुन्छ ।’
मानसिक रोगका औषधि सेवन गरिरहेका व्यक्तिहरुले अहिले नियमितरूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने प्रमुख कन्सल्टेन्ट साइक्याटिक्स डा अधिकारीले बताए । उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायतका दीर्घ रोगीले पनि आफूले खाँदै आएको औषधि नियमितरूपमा खानुपर्ने जरुरी छ ।
‘फलोअप’ का लागि अस्पताल जान सवारी साधन उपलब्ध नहुने र यो समयमा सकेसम्म भीडभाडमा जान नहुने भएकाले पहिले खाइरहेका औषधिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । सन्तुलित भोजन, पर्याप्त पानी खाने र लागुऔषधको प्रयोग नगर्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । उनले भने, ‘आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर आत्मबल उच्च बनाउँदा मानसिक रोगको जोखिम कम हुन्छ ।’